Fumana Uncedo- Galveston County Food Bank
Ukuba wena okanye umntu omaziyo ufuna uncedo lokutya, sebenzisa imephu engezantsi ukufumana indawo ekufutshane nawe.
Kubalulekile: Siyakukhuthaza ukuba unxibelelane ne-arhente ngaphambi kokundwendwela ukuqinisekisa iiyure zabo kunye neenkonzo ezikhoyo. Nceda ujonge ikhalenda ephathekayo phantsi kweMephu ukujonga amaxesha kunye neendawo zokuhambisa ukutya okuhanjiswayo.
Isampulu yeleta yoMmeli
Ukuba ungathanda ukutyumba omnye umntu oza kukuthathela ukutya, kufuneka aveze ileta yommeli. Cofa apha ukukhuphela isampulu yeleta yommeli.
Jonga iSampuli yeLeta yoMmeli
Izikhokelo zokufaneleka ze-TEFAP
Ukuze ukufanelekele ukufumana uncedo lokutya umzi kufuneka uhlangabezane nezikhokelo zokufaneleka.
Jonga iziKhokelo zokufaneleka
Ukutya okuphathwayo iTraki
Ukwabiwa kokutya okuSelfowuni kwenzeka kwiindawo zokubamba amaqabane ngaphandle kweGalveston County kwiintsuku namaxesha amiselweyo (nceda ubone ikhalenda). Oku kukuqhuba ngeminyhadala apho abamkeli baya kubhalisa ukuze bafumane ukutya okunesondlo okuninzi. Ilungu lekhaya kufuneka libekhona ukuze lifumane ukutya. Ukuzazisa okanye amaxwebhu NOT Kufuneka ukuba uye kunikezelo lokutya okuhanjiswayo. Kwimibuzo, nceda imeyile UKelly Boyer.
Ubhaliso / ukungenisa kugqityiwe kwindawo eshukumayo kwindawo yotyelelo ngalunye.
Ngenguqulelo eshicilelweyo yekhalenda, nceda ucofe iqhosha ngezantsi.
Ngekhalenda yoSasazo lweSelfowuni ngoMeyi 2022
Ngenkqubo yethu ye-Kidz Pacz sinikezela ngokutya, iipakethe zokutya ezilungele abantwana kubantwana abafanelekileyo iiveki ezili-10 kwiinyanga zasehlotyeni. Khangela indawo ekufutshane nawe kwiflaya okanye kwimephu edibanayo ngasentla. Abathathi-nxaxheba banokubhalisa kwindawo enye kuphela ngexesha leprogram. Gqibezela ubhaliso kwindawo yesayithi.